लामो ट्रेन यात्राको मा के कुराहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > लामो ट्रेन यात्राको मा के कुराहरू
(Last Updated On: 19/02/2021)
एक रेल सवारी हामीलाई रोक्न जानुहुन्न, विन्डो बाहिर हेर्न र बुझ्न लक्जरी हाम्रो समय को. यात्रा रोमाञ्चक छ तर कहिले काँही हाम्रा सबै ऊर्जा लाग्न सक्छ, लामो रेल यात्रा बन्द गर्नुहोस् र खोलन बाहिर द्वीपसमूह मौका छ. बनाउन सबैभन्दा तपाईंको यात्रा को बाहिर - यहाँ हरेक यात्री एक आराम र रमाइलो सवारी ग्यारेन्टी गर्न लामो रेल यात्राको मा गर्न हाम्रो शीर्ष कुराहरू छन्.
संगीत सुन्न लामो रेल यात्राको लिइरहेको बेला
आफ्नो मनपर्ने संगीत सुन्ने गर्दा आफ्नो हेडफोन मा राख्नु र सुस्त. त्यहाँ सुरम्य दृश्यहरु रमाइलो गर्न कुनै राम्रो तरिका हो. आराम र तपाईं आफ्नो मनपर्ने कलाकारहरूको सुन्न रूपमा सुन्दर परिदृश्य भीड विगतका हेर्न.
नयाँ भाषा सिक्न
किन आफ्नो यात्रा मा एउटा नयाँ कौशल विकास गर्न? तपाईं फरक भाषा बोल्छ कि देश यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, लामो रेल यात्रा केही शब्द र वाक्यांश टिप्न मौका प्रदान गर्दछ.
यो एक विदेशी देश भ्रमण गर्दा कुनै पनि भाषा को मूल कुराहरू थाहा राम्रो छ. Luckily, छन् धेरै अनुप्रयोगहरू र पडकास्ट तपाईं लोकप्रिय स्पेनिश सहित कि प्रस्ताव पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्न सक्छन्, जर्मन, इटालियन, र अंग्रेजी भाषामा.
पढाइ आराम लागि ठूलो छ र सधैं समय पारित गर्न एक सुखद तरिका हो. लामो काम घन्टा र व्यस्त जीवन पढाइ लागि कम समय अर्थ राख्छ, त्यसैले लामो रेल यात्रा आफ्नो पुस्तक वा इ-पुस्तक मा हाम फाल्न मौका प्रतिनिधित्व. तपाईं अल्छी महसुस र चाहनुहुन्छ भने तपाईं लागि पढेर के गर्न कोही, अडियो-किताब ठूलो वैकल्पिक.
बर्लिन गाडिहरु गर्न ब्रेमेन
ल्याप्टप संग, iPads, र आफ्नो निपटान मा स्मार्टफोन, सजिलो छ जहाजमा मनोरञ्जन पाउन. मा भेट्टाउने आफ्नो मनपर्ने टेलिभिजन श्रृंखला वा तपाईंले गरिएको छ कि चलचित्र तिर्सना हेर्न हेर्न.
त्यहाँ वाईफाई उपलब्ध वा छैन कि, यसलाई कुनै पनि शो डाउनलोड गर्न एक राम्रो विचार छ वा चलचित्र तपाईं आफ्नो यात्रा अघि हेर्न योजना. तपाईंको धेरै-प्रेम-स्क्रिन कथाहरू मा रहनुहोस् र तपाईंलाई थाहा अघि, तपाईं आफ्नो गन्तव्य मा हुनेछु.
को कैंटीन भ्रमण
यो थकित र सुस्त लामो रेल यात्रामा महसुस गर्न सजिलो छ. घण्टा को लागि एक रेल बसिरहेका पछि, यो सम्भव गर्दा आफ्नो खुट्टा सुत्छन् महत्त्वपूर्ण छ. को कैंटीन एउटा छोटो पैदल तपाईं समय प्रयोग गर्न र recharged महसुस गर्न मदत गर्नेछ. मा वाहकथ्रु कैंटीन, को देखो परिदृश्य र आफ्नो रुचि को एक पेय केही मिठाई आनन्द
लामो रेल यात्राको मा नयाँ मान्छे भेट्न
रेल द्वारा यात्रा हुन सक्छ सामाजिक अनुभव. नयाँ मान्छे बैठक रेलका मा अन्य मोड भन्दा सजिलो छ परिवहन. एक विमान विपरीत, तपाईं वरिपरि सार्न र अन्य यात्री संलग्न गर्न स्वतन्त्रता छ. यो तपाईं अन्य मानिसहरू र आफ्नो कथा सिक्न सक्छौं के आकर्षक छ – जीवनको बारेमा कुरा, काम, र तपाईंको नेटवर्क बढाउनुहोस्. तपाईंको पनी व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् कि उनीहरू पढ्दै छन्, उनलाई मिठो प्रस्ताव, वा केवल को बारे मा कुराकानी प्रहार गन्तव्य तिनीहरूले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ. यो कुराकानी पारित गरिएको छ तपाईं गर्दा छ रेल द्वारा युरोप यात्रा कि चिरस्थायी सम्झनाहरु सिर्जना.
तपाईंको अर्को लामो रेल यात्राको लागि तयार
लामो रेल यात्राको कहिलेकाहीं समयमा शान्त मात्र अवधि हो आफ्नो यात्रा. तपाईं अभ्क तेल हाल्नु र आफ्नो चुनिएको गन्तव्य लागि तयारी गर्न को लागि यो एक शानदार मौका हुन सक्छ. पिउन पानी प्रशस्त, केही खाना खाऊ, र यदि सम्भव छ भने, निद्रामा. तपाईंको अर्को गन्तव्य लागि तयार - बुद्धिमानीसाथ लामो रेल यात्रा प्रयोग तपाईं ताजा र energized महसुस गर्न मदत गर्नेछ.
तपाईं लामो रेल यात्राको समयमा के गर्छन्? हामीलाई tweeting हामीलाई थाहा दिनुहोस् @SaveATrain! , तपाईं हाम्रो अन्य सामाजिक च्यानलहरू पाउन सक्नुहुन्छ Saveatrain
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml र तपाईं / यो वा / NL र अधिक भाषा गर्न / ES परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
longtrainjourneys रेल यात्रा यात्रा
ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा डेनमार्क, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा पोर्तुगल, ट्रेन यात्रा स्कटल्याण्ड, ट्रेन यात्रा स्पेन, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप, यात्रा आइसल्याण्ड